IOS 14.6 ayaa ogolaan doonta in emayl lagu daro Habka Lost ee walxaha ee shabakada Raadinta | Wararka IPhone
IOS 14.6 ayaa u oggolaan doonta emayl lagu daro Habka lumay ee walxaha shabakadda Raadinta
Angel Gonzalez | 11/05/2021 22:00 | macruufka 14, Noticias
macruufka 14.5 Waxay ahayd mid ka mid ah cusbooneysiintii ugu weyneyd tan iyo markii la sii daayay iOS 14 dhammaadkii sanadkii hore. Xiddiga cusub ee cusbooneysiinta ayaa shaki la'aan suurtagalnimada furitaanka iPhone-ka iyada oo aan loo baahnayn Aqoonsiga Face-ka iyada oo ay ugu wacan tahay isdhexgalka Apple Watch iyo watchOS. Si kastaba ha noqotee, wali way ka shaqeynayaan Cupertino shalayna waxaa la bilaabay beta seddexaad oo loogu talagalay horumariyeyaasha iOS 14.6. Nooc aan iska dhigaynin wax weyn marka laga hadlayo howlaha cusub sida iOS 14.5 laakiin taasi waxay keeneysaa wax cusub, sida suurtagalnimada in lagu daro emayl la xiriira walxaha la jaan qaada shabakadda Raadinta, oo ay ku jiraan AirTags.
Ku darista emayl ama taleefan Lost Mode waxay suurtagal ku noqon doontaa macruufka 14.6
Kudar cinwaan emayl si haddii qof u helo sheygaaga oo uu doonayo inuu kula soo xiriiro, way awoodaan. Mar alla markii aad awood u yeelatid Khasaaraha Lumey, cinwaanka iimaylku waa u muuqan doonaa qofka helaya sheygaaga. Tani waxay u oggolaaneysaa dadka kale inay kula soo xiriiraan markasta oo alaabadaada lumay la helo.
Waa kuwan tilmaanta muuqaalka kore ee waxa ku cusub macruufka 14.6 Saddexaad Beta. Ujeeddada ayaa ah awoodo inaad kudarto emayl laxiriira walxaha ee ku dhexjira shabakada Raadinta. Sidan oo kale, marka isticmaaleha lumiyo shay oo uu ku cusbooneysiiyo arjiga sida "Lost Mode", macluumaadka la xiriira milkiilaha si toos ah ayuu uga muuqanayaa aaladda laga helay.
Ilaa hada waxaad soo bandhigi kartaa a lambarka taleefanka. Si kastaba ha noqotee, isticmaaleyaal badan ayaa doorbidi doona inaysan soo bandhigin xogtooda shaqsiyadeed ee ugu badan waxayna bixiyaan koonto emayl ah si ay u oggolaadaan xiriir fudud. In kasta oo ay weli jirto waddo dheer oo loo maro macruufka 14.6, waxay u badan tahay in shaqadani wax laga beddeli doono oo ay ku kala duwanaan doonto betasyada soo socda.
AirTags: Dhammaan tabaha, dejinta iyo dejinta
Waxyaabaha taagan ayaa ah iskuma dari kartid lambarka taleefanka iyo emaylka qaabkii lumay. Si kale haddii loo dhigo, isticmaaluhu waa inuu doortaa inuu doonayo mid ka mid ah macluumaadka inuu muuqdo ama mid kale. Waa wax is beddeli kara sababta oo ah macluumaadka badan ee la xiriira milkiilaha, waxay u badan tahay in markay la xiriirto, raadintu noqon doonto mid lagu qanco.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » IOS 14.6 ayaa u oggolaan doonta emayl lagu daro Habka lumay ee walxaha shabakadda Raadinta
Maadadu waa natiijada isbahaysiga otomatiga guriga ee u dhexeeya Apple, Google iyo Amazon